Nya Hmwe Pann – Page2– News And Media
သမီးဈေးသွားလိုက်ဦးမယ်နော် “” အေး အေး သမီး ဘယ်လောက်တောင်ကြာမှာလဲ “” ကြာမယ်ထင်တယ်အမေ ဆိုင်စောင့်ပေးရမယ်ထင်တယ် သွားပြီနော်အမေ့ “မိထားက ကိုယ့်အကြံနှင့်ကိုယ် ခပ်သွက်သွက် ထွက်လာခဲ့သည်။ အခုတလော အမေပုံမှန်မဟုတ်။ အဖေကလည်း ဒီတစ်ခေါက်ခရီးထွက်တာ ကြာနေသည်မဟုတ်လား။အမေ့အသက်က ၃၅ နှစ်သာဆိုသည်။ အသားဖြူသည်မို့ လှသည်။ နှုတ်ခမ်းပါးသည်။ မျက်ဝန်းညိုကြီးများဖြင့် အင်မတန်လှသည်။ တင်သားစိုင်ကြီးတွေက အိဝိုင်းနေသေးသည်။ ခါးကလည်းသွယ်သွယ်။ နို့တွေကလည်း စူဖြိုးလှသဖြင့် အဖေ့သူငယ်ချင်းများ တံတွေးမြိုချကြသည်ကို မိထားမြင်ဖူးသည်။သို့သော် အမေထိန်းသိမ်းခဲ့သည်သာ။ ယခုတော့ အမေ ပုံမှန်မဟုတ်သည်ကို သတိထားမိသည်။မိထား ဈေးမသွားဘဲ Read more…
ကျနော့်နာမည်က သားထက် . . . အသက်က ၂၅ အခုဖြစ်တဲ့ဆော်ကြီးက အသက် ၄၀လောက်ရှိပြီ. . အသက်ကြီးတဲ့ဆော်တွေပိုကြိုက်တော့ ကွက်တိပေါ့. သူ့ နာမည်က မသီရိ…အပေးကလဲ လွှတ်ကောင်းဗျာ. ထန်လဲထန်ဆိုတော့ ကျနော့် အကြိုက်အမုန်းလိုးတာ အားရပါးရကို သူကလဲ အံကြိတ်ခံ… ဒီလိုနဲ့ တနေ့အိမ်ကလူတွေ အကုန်ဘုရားဖူးထွက်တဲ့နေ့ သူနဲ့ ချိန်းပြီး အိမ်ကိုလာဖို့ ပြောတော့ တယောက်ထဲဆိုမလာရဲ့လို့ သူ့ သူငယ်ချင်းခေါ်လာရင်ဖြစ်လားတဲ့… ရတရ်ခေါ်လာဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ ည၆နာရီလောက်ကျတော့လာပါလေရော. . သူ Read more…